Stew ron-kena miaraka amin'ny akoho - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Ao an-trano dia tena broth. Mieritreritra aho fa mihazakazaka ao amin'ny fianakaviana izany satria ny renibeko Juliana dia nanao an'izay broths matsiro niaraka taminay foana taolana, legioma ary "gallineja", araka ny nolazainy.
Ny marina dia rehefa mangatsiaka dia tsara foana ny ron-kena toa izao. Tena tian'ny zanako vavy izany, faly izy ireo raha misy lasopy isan-kariva ary faly aho manome azy ireo a Ny ron-kena vita amin'ny namboarina vita amin'ny akora voajanahary ary tsy misy preservatives na fandokoana.
Tsotra be ny manao azy, iray ihany no mila antsika fiomanana amin'ny nahandro amidy am-bilia ao amin'ny supermarket. Izy ireo dia mitondra sombin-javatra maromaro hanomanana ron-kena, toy ny hazondamosin-kisoa, tendron-tsolika sitrana, kibon'ny kisoa Iberia, tànana henan-kisoa, indraindray aza mitondra akoho akoho na sombin-javatra hafa. Manampy akoho ampahefatra miampy seleria kely sy tongolo kely koa aho.
Napetrakay tao anaty sobika izany rehetra izany ary nofenoinay rano ilay vera. Ao anatin'ny adiny iray amin'ny fandrahoana nahandro no ananantsika telo litatra ron-kena. Zava-dehibe, alohan'ny hanamboarana ny ron-kena, ny fanomanana ny laoka amina rano hamoaka azy io mba tsy ho masira intsony aorian'izay ny saborotsika.
Ny lasopy telo litatra dia atao in-droa ao anaty vera. Tamin'ny fotoana voalohany nanaovako azy, rehefa nanandrana ny ron-kena voalohany aho dia nanandrana sira kely "spiked" ary nasiako rano kely vera mba hampihenana izany an'ireo zanako vavy, nefa tsy tsapako fa ny ron-kena faharoa dia mivoaka maloto kokoa ary noho izany tokony hataontsika atambaro izy roa mamely ilay toerana mamy.
Es tena azo ampiharina ny hatsiaka ity brothère ity. Noho izany, rehefa te hampiasa azy io ianao manaova lasopy na fomba fahandro hafa, tsy maintsy esorinao fotsiny ilay izy ary vonona hampiasa.
Raha tianao ahenao izany ataovy amin'ny sotro rehefa mangatsiaka.
1 Stew ron-kena miaraka amin'ny akoho
Broth tonga lafatra hanaovana lasopy vita an-trano.
Loza mifangaro laoka
Nofoaninay ny fanomanana ny vilany adiny iray sy sasany talohan'izay. Rehefa avy nohamarinina dia nametraka rano iray litatra sy sasany tao anaty vera izahay ary nametraka ilay harona niaraka tamin'ny akora rehetra tao anatiny. Izahay dia manao fandaharana 30 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Amin'ny faran'ny dia esorinay ny harona amin'ny alàlan'ny spatula ary arotsaho ao anaty vilia lehibe na vilany ny ron-kena ary fenoy rano indray litatra sy tapany indray ilay vera. Naverinay teo amin'ny toerany ilay harona, nikatoninay ny vera sy ny programa 30 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ampiarahinay miaraka amin'ny ron-kena teo aloha io ary efa nomaninay ny lasopy namboarinay.
Raha lehibe dia lehibe ny fitoeram-panomanana vilany, dia ho ampy hanamboarana ron-kena in-2 ianao.
Fanazavana fanampiny - Lasopy tsara indrindra ho an'ny orana
Loharano - Namboarina sy namboarina ho an'ny Thermomix® avy amin'ny bilaogy Vitónica ny resipeo
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 1 1/2 ora, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Recipe manokana » Celiac » Stew ron-kena miaraka amin'ny akoho
Rakel dia hoy izy:
Salama xicas, mazàna aho no manao an'io resipeo io fa ao anaty vata fandrahoan-tsakafo haingana ary mametraka ovy sy karaoty feno roa foana aho, ny fanontaniako dia raha azonao atao ny mametraka azy ao anaty thermomix satria mieritreritra aho fa tsy afaka mametraka izany ao anaty harona, misaotra tovovavy tsara tarehy.
Valiny tamin'i Rakel
Tsy azo atao Rakel ao anaty harona satria tery tokoa ny zava-drehetra ka tsy misy toerana. Ary eo ambanin'ny harona dia saika tsy misy toerana hametrahana azy ary koa hamaha tanteraka izy ireo.
Salama Elena sy Silvia, ity recette ity dia vonona ho ahy rahampitso, ary tsy nanoratra vetivety foana aho mahita anao isan'andro, anio dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny rafozambeko aho ary mitondra azy ny mofomamy sôkôla sy kafe miaraka amin'ireo mpanan-talenta ary sôkôla hazelnut, dia mahagaga izany. Fa raha tianao izany dia holazaiko aminao, haaaaa dia nanao resipeo bebe kokoa ihany koa aho izay tena tsara ... CAKE CHOCOLATE AND COOKIES, CHANNELS TRANO SY PATÉ ary maro hafa, tohizo izany dia satria tena tsara ianao ary manoratra boky resipeo Mety ho tsara tokoa satria efa nangataka azy aho… FIVORIANA SY FIVORIANA HO AN'NY REHETRA… avy amin'i tomelloso …………….
Salama Mari Carmen, andramo ny ron-kena izay mety ho tianao.
Manantena aho fa hahita fandresena ny mofomamy nahaterahan'i rafozanao.
Salama, nametraka fomba fahandro tena tsara ianao, kely no ampiasaiko nefa izao aho manomboka, na izany aza, tiako kokoa ny sakafom-pastry, oroka, Marisa
Marisa, heveriko fa marina ny anao, tiantsika daholo ny fomba fahandro mofomamy fa indrisy fa tsy afaka mihinana mamy sy misaotra fotsiny isika, raha tsy izany dia ho simba ny fandidiana bikini.
Andramo ny ron-kena, tsotra be izy ary tena matsiro !!
Salama aho nahita anao vao haingana ary tiako ireo resipeo narosonao, saingy miaraka amin'ity broth ity ity dia manana ahiahy aho, inona no tianao holazaina amin'ny fiomanana, saosisy, taolana masira
Cruz, fantsom-boaloboka hanomanana ron-kena toy ny hazondamosin-kisoa, tendron-tantarana sitrana, vavonin-kisoa Iberiana, tànana henan-kisoa, indraindray aza dia mitondra akoho toy ny feny akoho ... Misy lovia be dia be ary manome anao indroa ny habetsaky ny zavatra entiny.
Salama zazavavy, faly aho amin'ny fomba fahandro anao, tsotra be io, ka mila manandrana ianao rehefa miala amin'ny fisalasalana ananako, inona ny fanomanana vilany? Ilay fanomanana masaka ve no tianao horesahina? Misaotra anao.
Conchi, dia lovia kely amidy amina fivarotana lehibe (mercadona, Ahorramás, hipercor, Carrefour ...) ary mazàna manana taolana hanamboarana ron-kena toy ny hazondamosin-kisoa, tendron-tsolika sitrana, kibo Iberianina, tànana henan-kisoa, indraindray aza dia mitondra akoho toy ny fe akoho ... Ny fako sasany tena lehibe ary hanome anao indroa ny habetsaky ny zavatra entiny. Nozaraiko roa izy avy eo ary napetaka tamin'ny ampahany ny taolana mba hanaovana ron-kena indray mandeha.
Misaotra betsaka Silvia dia faly mamaha haingana ireo fisalasalana ananantsika.
Ataoko matetika ary tena tsara.
Ny marina dia fahafinaretana ny misotro ronono an-trano ary tsotra ny miomana.
Tiako ny broths, andramako ity iray ity
Azo antoka fa ho tianao izany. Tena manankarena tokoa izy amin'ny alàlan'ny broth de ville izay mahatonga anao ho tia.
Salama indray, omeko ny tehina foana ny tsy hiovaova, azafady, fa tsy haiko ny tianao holazaina amin'ny fanomanana vilany, inona ny zavatra henan-kisoa masira?, toy ny taolan-tehezana sns ... misaotra
I Cali dia taolana hanamboarana ron-kena toy ny hazondamosin-kisoa, tendron-tsolika sitrana, kibon'ny Iberia, tanana henan-kisoa, indraindray aza dia mitondra akoho toy ny feny akoho ... Misy lovia be dia be ary manome anao indroa mihoatra ny haben'ny zavatra entiny.
Andramo fa tsara be!
Aiza no ahitako ny lebadura simika?
Ao amin'ny magazay lehibe rehetra, ny masirasira simika no fanjakan'ny fiainana rehetra azo avy amin'ny sachet.
Salama, tena tsara, satria fantatro ianao, amporisihina aho hanao zavatra bebe kokoa amin'ny thermo ahy, manomboka amin'ny exo androany ary nanomana voatabia an-trano sy valahana cod, holazaiko anao ny nialako ny fiarahabana ary nanohizako nanao azy ireo oroka lehibe
Misaotra Ainhoa ​​noho ny fanarahanay anay, faly aho fa entanina ianao hampiasa bebe kokoa ny thermomix misy ireo resinay. Mirary ny soa indrindra
monse dia hoy izy:
ny lakozia ... tsara tarehy ...
Mamaly an'i montse
Misaotra anao Montse, ny marina dia efa nifankatia taminy nandritra ny taona maro aho.
manana resipe ho an'ny coscus ve ianao? Misaotra anao
Tsy mbola nanao an'io resipeo io aho fa hanontany an'i Elena izay toa hitako fa manana an'io.
Salama Silvia, nivoaka ny fahafatesana ny sôkôla, tsy nisy niangana na iray aza, fa ny sôkôla sy mofomamy misy profiteroles, saika nandeha tsara ny zava-drehetra afa-tsy ny sosona faharoa rehefa nesoriko ny lasitra, niparitaka daholo ny zava-drehetra, tsy haiko ny antony, satria ny 19 dia manana sakafo hafa ato an-tranoko aho, toy ny mahazatra, ananako ity hanana lakozia, hananana tsindrin-tsakafo karakaraiko ho azy ireo, lazain'izy ireo amiko fa ilay manana sôkôla 3, fantatro fa tena tsara izy io fa izaho reraky ny fanatanterahana izany, izy ireo dia angatahin'izy ireo ho an'ny ankizy, tsia fantatro fa mandehandeha vorona aho hoe iza no tianao… tsara ary veloma aho somary kivy… FIVORIANA SY MANKASITRAKA ANAO REHETRA…. .tomllso
Tonga tampoka tao amin'ny pejinao aho, toa mahaliana ahy izany, isan'andro mijery azy aho mahita zava-baovao, somary sahirana aho amin'izao andro izao, fa raha vantany vao vitako dia manomboka amin'ny resipeo aho, indrindra fa mafana fo aho momba ny mofomamy, hotantaraiko anao izany.
Misaotra ny zava-drehetra, arahabaina avy amin'i Ana.
Tongasoa eto Ana, faly aho fa tianao ny bilaoginay ary rehefa sahy mampiasa resipeo ianao dia holazainao aminay ny fomba.
MONICA VIRTO dia hoy izy:
Salama tsara, izaho koa ho an'ny broths atsipiko avy amin'ny vilany haingana, hanandrana amin'ny thermo aho, ny zavatra rehetra dia azo, bsos.
Valio amin'i MÓNICA VIRTO
Matetika aho no nanamboatra ny vilaniko fa satria tsy mampiasa thermomix fotsiny aho dia mila manandrana ary tiako izao. Mirary ny soa indrindra
Taloha lasa izay dia nanandrana nanamboatra lasopy tamin'ny thermomix aho, ary ny marina tsy ratsy, saingy fantatrao fa manadino fomba fahandro ianao indraindray na mijanona tsy manao azy intsony. Tsara ho ahy ny mahatadidy, na izany aza, tsy mitovy ny fomba fahandro nosoratako, ka hanandrana ny anao aho. Oroka kely
Holazainay aminay ny fomba hivoahan'ny ron-kena, manantena aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra
Matetika koa aho no manamboatra ron-kena ary manala azy. Ny zanako vavy 4 taona dia tia fideitos, kintana na taratasy kely koa amin'ny alina ary aleoko esorina ny broth izay nataoko toy izay ny manampy ireo izay amidinao fa tsy fantatro akory izay ananany.
Amin'ny thermomix, izay rehetra apetrako dia tsy mety, izany no anaovako azy amin'ny onja mazava
Misaotra anao amin'ny resipeo
Tian'ny zanako vavy koa ny lasopy misy taratasy ary natokana hitady ny taratasin'ny anarany izy ireo, mampihomehy tokoa ny mahita azy ireo mankafy ny lasony.
Rehefa apetrakao fanindroany ny rano dia avelantsika tsy hitovy amin'ny sobika ve izany, sa isika koa mametraka ny vilany vaovao ???
Miaraka amin'ny rano faharoa dia mamela ny fanomanana mitovy amin'ny sobika efa nananantsika teo aloha isika.
Manao toy izany koa aho, fa tsy nividy fanomanana, dia nasiako fe sy akoho akoho, taolana fotsy na taolana shin, taolana ham, 1/2 leek, 1/2 tongolo, seleria, tongolo lay 1 ary tapa-toto kely ary tendron'ny sira churasita.
Mivoaka tsara ilay izy, ataoko amin'ny faritra 2 ihany koa, saingy averiko manontolo indray ny zava-drehetra, afa-tsy ny taolana ham izay manararaotra azy sy ny kongresy ary ny seleria, fa fanindroany kosa tsy asiana fatotra, akoho fotsiny . Hitako fa tena tsara ary ny zavatra tsara indrindra dia ny hoe tsy mila mitandrina be ianao hampandeha azy nefa tsy mifantoka be loatra.
Misaotra betsaka Lola, noho ny fandraisanao anjara lehibe, azoko antoka fa maro amintsika no hanandrana ny soso-kevitrao. Mirary ny soa indrindra
anglisy dia hoy izy:
Salama Lola, tena tiako ny manao toa anao, saingy tsy hitako fa mifanaraka amin'ny harona daholo izay nolazainao, marina? Ahoana no anaovanao azy?
Mamaly an'i sensi
Miala tsiny fa tendron'ny sotrokely io
Tiako ny bilaoginao mahandro sakafo! Tena feno izy io! Namaky anao tamim-pahanginana aho saingy izao efa namporisika ny tenako hamorona bilaogy izao dia mbola hamangy anao bebe kokoa aho.
Faly aho Pilar fa entanina amina zavatra toy izao ianao, zavatra mahafaly tokoa. Hitsidika anao izahay.
Inona ny sakanao?
Mamaly an'i lola
Salama, efa ela no namakiako ny sakananao ary tiako ny fomba fahandro voazava tsara sy mora, manana olana kely aho, tsy mipoitra ny mofomamy Genovese, manoroka ary mametraka resipeo foana
Valio i Marya
Sambany aho no manoratra, saingy nahavita fahombiazan'ny sasany tamin'ny resanao aho nandritra ny volana maro. Niezaka foana aho nanamboatra ron-kena namoaka zava-mahadomelina, ary tsy nahomby aho, raha vantany vao hitako izany dia nataoko izany ary fahombiazana, araka ny nolazain'ny zanako, toy ny ron-drazan'ny renibeny! Ny marina dia tena tsara. Miarahaba anao! Ary misaotra anao noho ny resinao.
Marina tanteraka ny zanakao, mampahatsiahy ahy foana ny ron-kena azon'ny renibe izany, faly aho fa tianao izany.
Tiako ny bilaoginao, matetika aho no mijery azy ary manampy ahy betsaka amin'ny ankizy sy ny fianakaviako izany. Ahoana ny momba ny ron-kena, ny fomba hamoahana ny fanomanana amin'ny thermomix na atsipy anaty rano irery? Misaotra betsaka …………… transmitíis manao zavatra amin'ny thermomix …………
Araraka anaty rano ao anaty lovia lehibe ny fikarakarana ary avy eo rehefa vita dia esory ny rano dia ataovy ao anaty sobika hanaovana ny ron-kena.
Salama Silvia, tanàna kely ao amin'ny faritanin'i Huelva aho manodidina, nomena anarana maro ny vilany: vilany, vilany, vilany, laoka, akoho amam-borona ary akoho sns ... ary samy manana akoho vavy daholo izy rehetra. Ao amin'ny resinao no tsy namakiako azy ireo, hitako fa angamba manana fomba hafa anaovana lasopy sy lasopy ianao. Fantatrao ny manodidina eto fa ny pouting dia hetsika iray foana, antenaina fa misy havana izay mivoaka, olona marary, aorian'ny fitsangatsanganana, amin'ny fivahinianana fivahinianana del ROCIO dia miaraka amin'ny rebujito "tonga ary fito" inona koa no fantatro Eto, farany, io ilay resipeo izay misy foana isaky ny trano. Raha ampidirina amina resipeo kely 1 na 2 aza ao anaty resinao ary ampitomboinao ny tsiron'ny akora rehetra, hoy aho, satria tsy haiko ny habetsany, ohatra, ao an-trano dia manao vilany lehibe aho, mivoaka ny zanako lahy ary rehefa tonga izy dia ataoko ka raiso ny kasipeo. Holazainao amiko.
Immaculate, inona ny fientanam-po tato amiko nahita ny hevitrao momba ny fandehanana any Rocio, fa tsy fantatro izy, tena tsapako izany ary rehefa miteny brothta toa izany ianao dia mihira ho an'iza. Heveriko fa hevitra tsara ny manampy zana-borona. Andao hojerentsika raha manandrana aho amin'ny manaraka. Mirary ny soa indrindra
Holazainao amiko. Fa na dia mametraka vola kely aza ianao, vao maika tsara kokoa noho ny efa fonosina, napetrako izy ireo ny alina talohan'izay raha handany ny maraina, raha tsy ny mifanohitra amin'izay dia matetika mametraka 1K aho, avy eo dia haveriko anaty gony, ka manana foana aho.
Fantatrao fa manana EL ROCIO aho amin'ny 30 ′ ary tsy handeha izahay fa raha sendra namakivaky ireo toerana ireo ianao dia manana ny tranonao amin'izay omena. fiarahabana
Hitsapa ny fomba fahandro toy izao aho, ary hotantaraiko anao izany. Misaotra betsaka anao tamin'ny tolotra nataonao, raha mankany Rocio aho dia tadidiko ianao. Mirary ny soa indrindra
Salama, tsy azoko atao tsara ny mandray ilay kaopy, tsy tafiditraiko tsara ao anaty sobika daholo ireo zavatra ireo, izany ve no antony mivoaka ny rano rehefa mangotraka ?? .. ankehitriny dia nesoriko ny akora iray, ny kaopy mifanaraka ary mitohy mivoaka ny rano ao anaty kaopy. Ny habetsaky ny rano narotsako dia ilay tonga ao anaty recette. Normal ve ity? .. no vilany voalohany ataoko eo amin'ny fiainako, tena zazakely .. heh heh .. Oroka
Raha marina i Silvia fa indraindray dia mila fotoana kely vao tafiditra ao ireo singa rehetra dia mila manery kely azy ireo ianao. Na izany aza dia mivoaka kely ny rano rehefa mangotraka dia ampio kely kely raha toa ka mandoto anao be izy. Na esory ny goblet dia apetaho eo amboniny ny harona mba tsy handotoany be loatra.
Salama, izany no nataoko tamin'ny farany, nesoriko ny kaopy ary amin'ny fotoana manaraka dia hividy zavatra kely kokoa aho. Nozaraiko roa ny zava-drehetra, satria ankoatry ny feny, tratra, nanana hock koa aho, satria tsy natoky aho fa nandrahoina tanteraka ny hena, dia narotsako tao anaty vilany fandrotsanana nandritra ny 15 min .. Tsara be ny vokany! Noheveriko fa toa ahy ny ron-dohan'i Neny! Nolazainy tamiko fa tena tsara izany. Tsy fantatrao ny hafaliako, ny sakafom-boaloboko voalohany! Misaotra betsaka anao Silvia, tena, noho ity bilaogy ity no nahazoako tombony betsaka tamin'ny thermos, efa nanao meatloaf aho, indroa mivoaka matsiro ry zareo ary ny malalako dwarf io, holatra amin'ny saosy, sôkôla moouse, voanio miaraka amin'ny chorizo ​​ary vary miaraka amin'ny saosisy ... mahandro aho izao izay tsy nataoko mihitsy. Misaotra indray, oroka.
Faly be aho fa faly be ianao nitondra ity vokatra ity ho an'ny thermomix anao, ny marina dia fahafinaretana ny mahandro sakafo toy izao ary mahita ny vokany tsara.
Marilo dia hoy izy:
Tiako ity masaka ity, notorotoroiko ny felana kely vitsivitsy alohan'ny nampidirako ny rano ary napetrako tao anaty sobika sombin-kena, bacon, tapa-kena sy akoho akoho, ary ovy, karaoty ary sombin-selery Ankoatry ny sira, nivoaka tsara izy ary tian'ny zanako izany. Oroka iray, faly amin'ity bilaogy ity aho.
Valiny tamin'i Marilo
Ny fofona ihany no anaovako ny ron-kena, ho tsara izany, toy ny fomba fahandroanao rehetra, tsy maintsy mametraka menio ho antsika isan'andro fotsiny ianao. Tsy dia be loatra ny manontany, marina ”
Salama, ho hitanao, mazàna manao lasopy ao anaty vilany mazava aho. Manana ny thermomix aho fa noho izany dia aleoko ny vilany. Ary lazaiko aminao ny fomba fanaovako azy sy ny fahafinaretako alaiko avy ao anaty vilany. Napetrako daholo ny akora mahazatra sy ny ovy ary ny karaoty dia apetrako manontolo Rehefa vita izany dia esoriko ny ovy sy ny karaoty ary apetrako ao anaty colander, rehefa mangatsiaka ny tendrony amin'ny cubes ary manao salady Rosiana aho hisakafoanana ka efa manana sakafo atoandro sy sakafo hariva miaraka amin'ny sakafo iray ihany. pringá la pico ary manao meatloaf goodiiiiisimas aho !!!!!! ary efa misakafo atoandro, misakafo hariva ary sakafo hafa mandritra ny andro hafa aho. antenaiko fa nanome anao hevitra aho. inona ilay zavatra ratsy "tena" hahahaha veloma daholo ny olona amin'ny alàlan'ny thermomix no famoronana tsara indrindra ho an'ireo mpikarakara tokantrano
Nuria52 dia hoy izy:
Mbola tsy nanisy ron-kena tamin'ny thermomix nataoko aho, ary nivoaka ny sinema aho, ary tena namboarina tao an-trano, ny hany zavatra nampiana dia safrona kely, satria tiako ny manome loko kely azy, saingy hita fa tsara, tena tsara. Misaotra nizara ny resipeo.
Valiny tamin'i Nuria52
Vicen dia hoy izy:
Salama Silvia, teo am-pamakiana ny fomba fahandro ny ron-kena nandraho akoho aho ary ny zavatra lazainao momba ny fametrahana ny fanomanana hena ho desalinate dia nahasarika ny saiko, ny fanontaniako dia hoe inona no karazana fikomiana nandrahoana novidinao fa tokony homenao? Efa fantatro ny atin'ny lovia fanomanana vilany satria efa nohazavainao imbetsaka tao anaty hevitra, fa maninona ianao no mila manala azy? Ireo ve no karazana taolana fotsy toa rakotry ny sira? Satria mividy taolana feno fonosana aho nefa taolam-paty fotsiny no ao fa tsy misy hafa, taolana henan-kisoa ary rehefa manamboatra ron-kena aho dia mampiasa mpivady amin'izy ireo. Tena liana amin'ny fanaovana an'io brothère io aho fa tena manitikitika ny saiko hamoy ny ainy. Fisaorana an'arivony amin'ny pejinao, androany no fotoana voalohany hitsidihako azy ary heveriko fa mahafinaritra. Oroka.
Valiny tamin'i Vicen
Vicen tokoa, asina sira ireo sombin-tsakafo mba hitehirizana azy ireo mandritra ny fotoana lava. Izany no maha-zava-dehibe ny hametahana azy ireo alohan'ny handrahoana azy ireo satria raha tsy izany dia ho masira be loatra ny ron-kena rehetra. Na ahoana na ahoana, raha te-hanamboatra azy amin'ny akora vaovao (izay tsy asina sira) dia safidy tena tsara dia mbola ho matsiro. Misaotra nanoratra taminay!
Fanosotra mangatsiaka amin'ny karaoty sy apricots